Auto Saadaasha Expert Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Auto Saadaasha Expert Forex Tusiyaha
Auto Saadaasha Expert Forex Tusiyaha
Auto Saadaasha Expert Forex Tusiyaha waxaa lagu sameeyey iyo gudbiyey by Kishore M. Waxaa mas'uul ka ah soo bandhigeen line ah oo midabka isbedel ka buluug ah si ay orange. tilmaame Tani waa natiijo ka mid ah barnaamijyada adag in uusan ku lug leeyihiin mid ka mid ah tilmaamayaasha guud loo isticmaalo sida maanta suuqyada maaliyadeed, sida MACD ah, RSI ama celceliska dhaqaaqin. tilmaanta halkii laftiisa islana xaaladaha suuqa ee hadda la isticmaalayo algorithms adag ku salaysan tallaabo qiimo iyo tilmaamayaasha caadadii baxay. tilmaame wuxuu ku siinayaa aad iibso ama iibi signalada. Waxaa sidoo kale soo bandhigay halkaas oo in meel aad stop khasaaro via pop up suuqa kala heegan ah iyo sidoo kale on shaxda. Heerarka stop khasaaro waxaa lagu tilmaamay by barbaro line a midabeysan ee shaxda ugu weyn ee ganacsiga.
Si kastaba ha ahaatee, xataa haddii tilmaanta laga sameeyey oo geynta barnaamijka adag, waa mid aad u fudud marka ay timaado waxa la isticmaalayo. Waxaad dhab kaliya sugi tilmaanta inuu ku siiyo calaamadaha iyo aad shaqada si gato ama la iibsado marka aad signal a doono.
tilmaame la sameeyey si loogu isticmaalo waqtiga kuwa ka badan 5 daqiiqo waqtiga. marna waa in aad isticmaasha tilmaamahan la 5 jir markii daqiiqadii maadaama ay tahay mid aad u khatar ah. Waxaa sidoo kale loogu talagalay in hab sida in waxa la habboon in ganacsiga oo dhan lammaanaha lacagta.
tilmaame ayaa mas'uul ka ah soo bandhigeen pop heegan signal a ilaa uu furmo suuqa. daaqadan qora noocyada kala duwan ee macluumaadka oo ay ku jiraan: jihada Taxana: Taxane UP ama Taxana DOWN, qiimaha Entry, Labada ciyaaryahan, Gato ama la iibsado signal, Jooji heerka khasaaraha iyo Qaabdhismeedka (on kuwaas oo signal shaxda helay).
lagugu tuday sawirka.1. heegan signal The arbushin ilaa uu furmo suuqa.
Fig.2. Muujinaya sida Auto Saadaasha Tusiyaha Expert u eg markii ay ku raran on shaxda ganacsiga ah.
Marka Ganacsi isticmaalayo Tilmaame this, waxaa jira qaar ka mid ah macluumaadka muhiimka ah ay tahay inaad ogaato. Mid ka mid ah waxaa loo aqoonsanayo isbedel muddada dheer. Haddii aad waxaa loo isticmaalaa in ganacsi la isticmaalayo 1 saac waqti, shuban ah 2 saacad wakhti iyo eegaa arrimuhu. Tani waa inta badan muhiim ah tan iyo tilmaanta ku tusi doono oo kaliya dhaqankan cusub ee waqtiga hadda maalintii oo dhan oo aan ku tusi doonaa in looxyada kale waqti. Marka aad hesho habkani, Haddaba ganacsade ah, waa in aad iska indho oo dhan calaamadaha ah in la siin doonaa bartamaha aad arrimuhu waqti sare (signal caalamka).
Markaas ganacsade ah waa in ganacsiga jirin marka arrimuhu qiimaha suuqa geesgees u yahay. Inta lagu jiro wakhtigan suuqa waa fadhiya oo aan go'aansaday on arrimuhu iyo marka aad meel furo, laga yaabaa inaad samaynta khasaare haddii suuqa doorto inuu u dhaqaaqo jihada soo horjeeda.
Saarid Xirfado (furitaanka jagooyinka) isticmaalaya Auto Saadaasha Tusiyaha Xeeldheer.
The calaamadaha of tilmaame this yihiin isbedel midabka. midabka buluuga ah wuxuu muujinayaa uptrend ah halka midabka orange muujinaysaa isbeddello qaybta hoos u ah. Sidaa darteed signalka waa marka midabka ah ee line u beddelayo. Tusaale ahaan haddii line ahaa orange oo dhan lama filaan ah badala si buluug, ka dibna waxaa jira signal iibsan iyo qeybsanaan ku xigeenka.
gadashada: ganacsade ah waa in meel iibsan marka midabka ah ee line u beddelayo ka orange in buluug.
IIBINTA: ganacsade ah waa meel si iibiyay marka midabka ah ee line u beddelayo ka buluug ah si ay orange.
Tusaale furitaanka Xirfado isticmaalayo Tilmaame this.
Auto Saadaasha Expert Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Auto Saadaasha Expert Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Auto Saadaasha Expert Forex Indicator.mq4?
Download Auto Saadaasha Expert Forex Indicator.mq4
Copy Auto Saadaasha Expert Forex Indicator.mq4 aad Metatrader Directory / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on Auto Saadaasha Expert Forex Indicator.mq4
Tusiyaha Auto Saadaasha Expert Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Auto Saadaasha Expert Forex Indicator.mq4 4 Chart?
Auto Saadaasha Expert
Next articleEZT siiya Swing Forex Tusiyaha